‘केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्नुपर्छ’ – Koshidaily
मुख्य पृष्ठराजनीति‘केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्नुपर्छ’
‘केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्नुपर्छ’
२४ बैशाख २०७७, बुधबार ०४:०८ प्रकाशित
काठमाडौं । बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष या प्रधामन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्ने भएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अलग्गै भेला गरेर उनीहरूले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको वैधानिक अवधारणालाई अघि बढाउने भएका हुन् ।
स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने २० जना सदस्यहरूको मङ्गलबार सामूहिक बैठक बसेको थियो । बैठकले मूलतः अध्यादेश प्रकरण, कोरोना महाव्याधि र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टीका हरेक निकायमा लागु गर्न दबाब दिने निचोड निकालेको बताइएको छ ।
“पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको वैधानिक व्यवस्थालाई तलदेखि माथिसम्म लागु गर्नुपर्छ । हामीले बैठकमा यही कुरा उठाउँछौं,” भेलाको पुष्टि गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पद (मुख्य जिम्मेवारी) प्रभावकारी हिसाबले लागु गर्नुपर्ने बताए ।“एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा आइराखेको छ । हिजोदेखि नै उठिरहेको छ । अहिले मिलेर जाने कुरा आयो नि त, प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्दै आत्मालोचना गरिसकेपछि केही चिजहरू त मिलाउनुपर्‍यो,” गजुरेल भन्छन् ।
एक व्यक्ति एक पदको कुरा लागु गर्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री तरङ्गित हुन पुगेको उनी बताउँछन् । “एक व्यक्ति एक पदको तरङ्ग हो । मिलेर जानुको विकल्प छैन,” उनले भने ।
दोस्रो, अध्यादेश प्रकरण बैठमा प्रखर रूपमा उठाइने गजुरेलले बताए ।“प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश किन ल्याउनुभयो ? गल्ती थियो कि, अथवा ठीक हो कि ? प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि महसुस गर्नुभएको छैन । उहाँहरूले अहिले पनि साथीहरूले बुझेनन् भनिराख्नुभएको छ, त्यसो भए उहाँले बैठकलाई बुझाउनुपर्छ,” गजुरेल भन्छन् ।
अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ आउनुपर्ने गजुरेलको मत छ ।स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा कसरी अगाडि बढ्ने, के कुरा उठाउने भनेर सामान्य छलफल भएको बताए ।
“स्थायी कमिटीको बैठक हामीले माग गरेका हौं । हामी मागकर्ता भएपछि विषयहरू लैजानुपर्‍यो । त्यही स्थायी कमिटी बसेका थियौं । छलफल जारी छ,” उनले भने ।
एक व्यक्ति एक पदको उठानकर्ता माधवकुमार नेपाल हुन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्ज पनि बनाइएपछि उनले अलग्गै भेला राखेर दोहोरो जिम्मेवारी बाँडफाँड नमान्ने बताएका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढेपछि पुनः एक व्यक्ति एक पदको माग ब्युँतिएको हो ।नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार बस्दैछ । स्थायी कमिटी बैठकको तयारीका लागि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।